‘एनआरएनए यूकेको ४ करोड हिनामिना गर्नेलाई कानूनी कठघरामा ल्याइन्छ’ : प्रेम गाहा मगर – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ ग्लोबल ∕ बेलायत ∕ ‘एनआरएनए यूकेको ४ करोड हिनामिना गर्नेलाई कानूनी कठघरामा ल्याइन्छ’ : प्रेम गाहा मगर
‘एनआरएनए यूकेको ४ करोड हिनामिना गर्नेलाई कानूनी कठघरामा ल्याइन्छ’ : प्रेम गाहा मगर
जीएनएन असोज १२, २०७७ गते ८:०४ मा प्रकाशित
बेलायत — गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको नवौं कार्यसमितिले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पार गरेको छ । एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष र संघको गोर्खा विभाग हेर्ने जिम्मेवारी हाम्रो कांधमा भएकाले हालसम्म भएका काम संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।
मेरा कतिपय शुभचिन्तकहरुको जिज्ञासा छ, तपाईं किन कार्यसमितिमा सधैं प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु हुन्छ ? अर्थात विद्रोह शैलीमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ । हो, म कुनै पनि क्षेत्रमा हात हालेपछि त्यसको आउटकम होस् भन्ने मान्छे हुं । म पद ओगटेर बस्ने मान्छे पनि होइन् र कुनै स्वार्थ लिएर संस्थामा आवद्ध भएको पनि होइन ।
विभागले लेफ्टीनेन्ट कर्णेल देवेन्द्र आले र लेफ्टीनेन्ट कर्णेल टोल काम्छा सल्लाहकार पाएको छ भने कानूनी सल्लाहकारमा सोलिसिटर राजु थापा, हेल्थ कोअर्डिनेटर डा. दिलिप यादव, क्याप्टेन रि. भिम सारु केस वर्करका रुपमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।
अमृता गिरी गजुरेल र बिनोद बुढाथोकीले असहाय तथा असक्त सम्बन्धि कामको संयोजन गरिरहनु भएको छ ।
४ करोड आर्थिक घोटालाबारे :
– प्रेम गाहा मगर एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष हुन्।